Koox Hubaysan oo ku dhex dagaalamaysa Maqaayadda la qarxiyay. – Hornafrik Media Network
Koox Hubaysan oo ku dhex dagaalamaysa Maqaayadda la qarxiyay.
By HornAfrik	 Last updated Jun 14, 2017
Faahfaahin dheeriya ayaa ka soo baxaysa Qarax iyo Weerar is daba socday oo ka dhacay Maqaayadaha Posh Treat iyo Pizza House. Waxaana laga maqlayaa Rasaas xooggan Gudaha Maqaayadahaas.
Warar hor dhac ah oo ka soo baxay goobta ay wax ka dhaceen ayaa sheegaya in Khasaaraha dhimashadda uu kor u dhaafay 10 Qofood. Dhaawucuna intaas ka badan yahay.
Ciidamadda Ammaanka iyo Kooxda Weerarka gaystay ayaa wali dagaalamaya. Waxaana adag xilliga oo habeen ah in la soo afjaro Weerarka. Iyadoona Kooxda Hubaysan ay ka dhex dagaalamayaan Maqaayadda Pizza House oo ka soo horjeeda Posh Treat.
Haweenayda iska leh Maqaayadda Posh Treat ayaa Barteeda Facebook ku soo qortay inaysan Maqaayadeeda wax ka dhicin. Waxayna sheegtay in la weeraray Maqaayadda Pizza House oo ka soo horjeeda Maqaayadeeda.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Ammaanka ayaa u sheegay Hornafrik in Maqaayadda laga dhex dagaalamayo ay tahay Pizza House. Waxaana Gudaha Maqaayadda ku jira Dhalinyaro ku qaxwaynayay oo ay ku haystaan Kooxda Weerarka gaysatay.
Dhawaqyadda Rasaas Xooggan iyo Bam Gacmeedyo ayaa laga maqlayaa Gudaha Maqaayadda Pizza House. Waxaana ka dhex dagaalamaya Gudaha Maqaayadda illaa iyo 4 Nin oo hubaysan.
Alshabaab ayaa sheegtay Masuuliyadda Weerarka ka dhacay Maqaayadaha ku yaala Hodan. Waxayna war laga baahiyay Iddaacada Afkooda ku hadasha ee Andalus ku sheegteen inay weerareen Maqaayado lagu tunto, sideey sheegteen.
Alshabaab waxay weerarka ku sheegeen inay ku dileen Shaqaalo Dawladeed iyo Saraakiil Ciidan.
Dawladda Somalia ayaan faah faahin ka bixin weeraradan.
Yaa Mudan in Xaqul Ciid la siiyo,????
faahfaahin Khasaaraha ka dhashay Weerarkii Caawa